सयभन्दा बढी नर्सिङ कलेज तत्काल बन्द हुने ! – Yuwa Aawaj
सयभन्दा बढी नर्सिङ कलेज तत्काल बन्द हुने !
असार ५, २०७८ शनिबार 365
काठमाडौ : राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको बा’ध्यकारी नियमअनुसार आफ्नो भवन नभएका नर्सिङ कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने भएका छन् ।
जसले गर्दा सयभन्दा बढी निजी नर्सिङ कलेज ब’न्द हुने अवस्थामा छन्। हाल देशभर को’रोना महा’मारीको उ’च्च जो’खिम रहेको र नर्सहरूको थप खाँचो रहेकै अवस्थामा चि’कित्सा शिक्षा आयोगले व्यवस्था गरेको नर्सिङ कलेजको
सय बेडको आफ्नै भवन हुनुपर्ने बाध्यकारी ऐ’नका कारण कलेज ब’न्द हुने र तीन हजार ६ सय विद्यार्थी नर्सिङ पढ्नबाट व’ञ्चित बन्नेछन् । आयोगको चि’कित्सा शिक्षा ऐ’न २०७५ अनुसार नर्सिङ विषय सञ्चालन गर्ने शिक्षालयहरूको आफ्नै सय बे’डको अनिवार्य अस्प’ताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले अस्प’ताल बनाउन कलेजहरूलाई दुई वर्षको अवधि पनि दियो। यो अवधि गत वर्ष नै सकिएको छ। दुई वर्ष बितिसक्दा समेत स्वा’स्थ्य विषय पठनपाठन गराउने
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतका शिक्षालयले आफ्नो अस्प’ताल बनाउन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित नर्सिङ कलेजहरूको समेत आफ्नो अस्प’ताल छैन ।
यति मात्र होइन, सिटिइभिटीको नर्सिङ पढाइ हुने पाँच आंगिक कलेजमा समेत आफ्नो अस्पताल नभएको सिटिइभिटीका प्रवक्ता विनोद बडालले बताए । उनका अनुसार सिटिइभिटीका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त गरी ९० शिक्षालयसँग आफ्नो अस्प’ताल छैन ।
अन्य विश्वविद्यालयका २० नर्सिङ कलेजहरूको पनि आफ्नो अस्प’ताल नभएको उनले बताए । प्रवक्ता बडालले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र आयोगमा नर्सिङको समस्या समाधानबारे धेरै पटक लिखित निवे’दन दिएको भए पनि हालसम्म कुनै समा’धान नआएको जानकारी दिए ।
जसकारण यस पटक एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थीमध्ये तीन हजार ६ सयले सिटिइभिटी अन्तर्गत नर्सिङ शिक्षा हासिल गर्न नपाउने उनले बताए । हाल सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित स्वा’स्थ्यसम्बन्धी निजी शिक्षालय एक सय १३ वटा छन् ।
जसमध्ये ९० शिक्षालयसँग आफ्नो निजी अस्प’ताल छैन । यस्तो अवस्थामा यस पटकको एसइईमा सहभागिता जनाउनेहरूले तीन वर्षे डिप्लोमा कोर्समा भर्ना नै पाउँदैनन् ।
Prevरबी लामीछानेको टीम,स्थलगत रिपोर्टिङ सहित राहत तथा उ’द्धारको लागि सिन्धुपाल्चोकमा ।(भिडियो सहित हेर्नु-होस्)
Nextगाउँ’पालिकाले नै एमबिबिस पढाउने ।
रुसले भर्खरै दियो नेपाललाई यस्तो ’सरप्राइज’ ! प्रधानमन्त्री ओली समेत चकित्…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)
काँक्राले स्वास्थ्यमा पु’र्याउने यती धेरै फाइदाहरु जान्नुहोस ।
राष्ट्रपतिद्वारा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि अध्यादेश जारी !
अहिले बिरामीको सेवामा खटौं, अन्या’यको हिसाब पछि गरौंला ।